ကိုယ်ပိုင်အလုပ်လုပ်နိုင်သောကျန်းမာရေးအာမခံရွေးချယ်မှုများ - ကုမ္ပဏီ | ဇန္နဝါရီလ 2022
ကုမ္ပဏီ, ကျန်းမာရေးပညာရေး ရပ်ရွာ၊ ကုမ္ပဏီ သတင်း၊ ကျန်းမာရေးပညာရေး ကုန်ပစ္စည်း မူးယစ်ဆေးဝါး သူငယ်ချင်း ရပ်ရွာ ရပ်ရွာ၊ မူးယစ်ဆေးဝါးသတင်း, သတင်း ကုမ္ပဏီ, အဆိုပါကုန်ပစ္စည်း ဆေးပညာသတင်း, ကျန်းမာရေးပညာရေး ကျန်းမာရေး အိမ်မွေးတိရိစ္ဆန် ပြင်းထန်သောအားကစား ကျန်းမာရေးပညာရေး၊
အဓိက >> ကုမ္ပဏီ >> ဤတွင်ကိုယ်ပိုင်အလုပ်အတွက်အကောင်းဆုံးကျန်းမာရေးအာမခံရွေးချယ်မှုများဖြစ်သည်
သငျသညျကော်ပိုရိတ်အမေရိကတိုက်ကျဆင်းနေနှင့်သင်၏ကိုယ်ပိုင်သူဌေးဖြစ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ပါတယ်။ ဂုဏ်ယူပါတယ်! သငျသညျ Self- အလုပ်အလုပ်သမားများ၏ကြီးထွားလာစစ်တပ်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
အရ ပြည်တွင်းအခွန်များဌာန သူ / သူမအတွက်စီးပွားရေးလုပ်ကိုင်နေသောသူနှင့်သူ / သူမ၏ ၀ န်ဆောင်မှုများကိုအခြားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများသို့စာချုပ်ချုပ်ဆိုသူသည်ကိုယ်ပိုင်အလုပ်ဖြစ်သည်ဟုယူမှတ်သည်။ ကိုယ်ပိုင်အလုပ်လုပ်ကိုင်သူကိုအလွတ်သို့မဟုတ်ကန်ထရိုက်တာအဖြစ်ရည်ညွှန်းသည်။
အကြမ်းအားဖြင့် အလုပ်သမား ၉.၆ သန်း ယူနိုက်တက်စတိတ်တွင်ကိုယ်ပိုင်အလုပ်များဖြစ်ကြောင်းအလုပ်သမားစာရင်းအင်းဗျူရို၊ အစိုးရအေဂျင်စီများကထိုအရာများကိုခြေရာခံသည်။ ထိုအခါနံပါတ်များကိုသာတက်သွားလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်နေကြသည်, ခန့်မှန်းခြေ 103 သန်းအမေရိကန်တွေသူတို့ကိုယ်သူတို့ကိုယ်ပိုင်အလုပ်အဖြစ်ရေတွက် 2026. ဒါက 7.9 ရာခိုင်နှုန်းတိုးပါတယ်။
သင်အလုပ်လုပ်သည့်အခါကုမ္ပဏီအလုပ်တစ်ခုတွင်သင်ရရှိခဲ့သောအကျိုးကျေးဇူးများနှင့်အကျိုးကျေးဇူးများကိုအထုပ်အပိုးတစ်ခုတွင်ပေးအပ်ခြင်းမရှိပါ။ သင်နှင့်သင့်မိသားစုဝင်များသည်ကျန်းမာရေးအာမခံကိုရှာဖွေရန်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကြိုးစားအားထုတ်ရမည်။ စဉ်းစားပါသင့်အတွက်မည်သည့်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုသည်အကောင်းဆုံးဖြစ်ကြောင်းဆုံးဖြတ်ရာတွင်အောက်ပါရွေးချယ်မှုများ -
သင်သည်အာမခံအစီအစဉ်မှတစ်ဆင့်စာရင်းသွင်းရန်အရည်အချင်းပြည့်မီနိုင်သည် ကျန်းမာရေးအာမခံစျေး သင်သည်လွတ်လပ်သောကန်ထရိုက်တာ၊ အတိုင်ပင်ခံ၊ အလွတ်တန်းသို့မဟုတ်အခြားလွတ်လပ်သောလုပ်သားတစ် ဦး ဖြစ်လျှင် ((The Affordable Care Act or Obamacare ဟုလည်းခေါ်သည်)) ။ ကျန်းမာရေးအာမခံလွှမ်းခြုံမှုအမျိုးအစားအတော်များများရှိပါသည်၊ အချို့မှာပရီမီယံနိမ့်သည့်အစီအစဉ်များပါရှိသည်။ ပွင့်လင်းစာရင်းသွင်းခြင်းအားနိုဝင်ဘာ ၁ ရက်မှဒီဇင်ဘာ ၁၅ ရက်အထိ၊ သို့သော် အကယ်၍ သင့်တွင်အထူးအခြေအနေမျိုးရှိပါကသင်သည်ထိုရက်စွဲများမှအပအာမခံကိုရနိုင်သည်။ သင်၏ရွေးချယ်မှုများအကြောင်းကိုဖက်ဒရယ်စျေးကွက်မှပိုမိုသိရှိလိုပါက www.healthcare.gov သို့သွားရောက်နိုင်သည်။
သန်းနှင့်ချီသောအမေရိကန်များကိုမက်ဒီကိတ်မှတဆင့်ကုန်ကျစရိတ်သက်သာစွာဖြင့်အခမဲ့ပေးအပ်ခဲ့သည်။ အကယ်၍ သင်၏အိမ်ထောင်စုသည် ၀ င်ငွေအဆင့်အတန်းတစ်ခုအောက်တွင်ကျဆင်းသွားပါက (ဖယ်ဒရယ်အစိုးရအနိမ့်ဆုံးစံနှုန်းများကိုသတ်မှတ်ထားသော်လည်းပြည်နယ်နှင့်အနည်းငယ်ကွဲပြားခြားနားပါသည်) နှင့်သင်သည်အခြားအရည်အချင်းပြည့်မီမှုစံချိန်စံညွှန်းများနှင့်ကိုက်ညီလျှင်သင်ကိုယ်တိုင်အလုပ်လုပ်ကိုင်နိုင်ပြီး Medicaid အတွက်အရည်အချင်းပြည့်မီနိုင်သည်။ Medicaid အတွက်ကျောင်းဖွင့်ရန်အချိန်မရှိသေးသောကြောင့်မည်သည့်အချိန်တွင်မဆိုသင်လျှောက်ထားနိုင်သည်။ သင်၏ကျန်းမာရေး ၀ န်ဆောင်မှုဌာနကိုပြည်နယ်သို့မဟုတ်ပြည်နယ်ဌာနသို့ သွား၍ Medicaid ၏လွှမ်းခြုံမှုအကြောင်းပိုမိုလေ့လာရန်နှင့်သင်အရည်အချင်းပြည့်မီမှုရှိမရှိကိုကြည့်ရှုရန်။
အကယ်၍ သင်သည်အသက် ၆၅ နှစ်နှင့်အထက်ဖြစ်ပါက၊ သင်သည် Medicare သက်သာခွင့်များကိုရထိုက်သည်။ အကယ်၍ သင်သည်သင်သည်လူမှုဖူလုံရေးမသန်စွမ်းမှု (SSD) တွင် ၂ နှစ်ကြာနေခဲ့ပါကသို့မဟုတ်သင်၌ ALS (Lou Gehrig's Disease) သို့မဟုတ် End State Renal Disease (ESRD) ရှိလျှင် Medicare အတွက်သတ်မှတ်ချက်များနှင့်လည်းကိုက်ညီနိုင်သည်။
အလုပ်ရှင်သည်မိသားစု ၀ င်မှတဆင့်စီစဉ်သည်
သင်၏အိမ်ထောင်ဖက်သို့မဟုတ်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ကိုအလုပ်ခန့်ထားပါကထိုကုမ္ပဏီ၏ကျန်းမာရေးအာမခံအစီအစဉ်ကိုရယူရန်မည်မျှကုန်ကျနိုင်သည်ကိုစစ်ဆေးပါ။ သင်တရားဝင်လက်ထပ်မဟုတ်လျှင်ပင်, သင်သည်အရည်အချင်းပြည့်မှီလိမ့်မည်။ အချို့သောအလုပ်ရှင်များသည်ပြည်တွင်းမိတ်ဖက်ရှိသူများအားပြည်တွင်းမိတ်ဖက်ကျန်းမာရေးလွှမ်းခြုံမှုဟုခေါ်သောအရာကိုပေးကြသည်။ သင်နှင့်သင်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် (လိင်တူချင်းစုံတွဲများအပါအ ၀ င်) သည်အိမ်တွင်အတူတကွနေထိုင်ပြီးမိသားစုဘဝကိုအတူတကွနေထိုင်ကြမည်ဆိုလျှင်သင်မည်သူတစ် ဦး တစ်ယောက်နှင့်မှလက်မထပ်ဘဲနေလျှင်၊ အကယ်၍ သင်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်၏အလုပ်ရှင်သည်သင်၏ကျန်းမာရေးအာမခံပရီမီယံ၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကိုပေးချေလျှင်၎င်းအတွက်အခွန်ပေးဆောင်ရလိမ့်မည်ကိုသတိပြုပါ။ ထို့အပြင်အချို့သောကုမ္ပဏီများသည်ထိုကဲ့သို့သောထုတ်လွှင့်မှုမျိုးကိုဖယ်ရှားပစ်သည်။ သင်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ကကုမ္ပဏီကြီးအတွက်အလုပ်လုပ်လျှင်သင်အအောင်မြင်ဆုံးဖြစ်သည်။ အရ ၀ န်ထမ်းအကျိုးခံစားခွင့်အစီအစဉ်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဖောင်ဒေးရှင်း ၀ န်ထမ်း ၁၀၀၀၀ ကျော်နှင့်အထက်ရှိသည့်ကုမ္ပဏီ ၇၅ ရာခိုင်နှုန်းကျော်သည်လိင်တူချင်းဆန့်ကျင်ဘက်လိင်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များအားကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုခံစားခွင့်များကိုဆက်လက်ပေးအပ်ဖွယ်ရှိသည်။
ထို့အပြင်၊ အကယ်၍ သင်သည်အသက် ၂၆ နှစ်အောက်ဖြစ်ပါကစျေးသက်သာသောစောင့်ရှောက်မှုအက်ဥပဒေအရသင့်မိဘများ၏ကျန်းမာရေးအာမခံအစီအစဉ်အောက်တွင်သင့်အားအကျုံးဝင်ပါလိမ့်မည်။
ပုဂ္ဂလိကအာမခံကုမ္ပဏီမှတဆင့်တစ် ဦး ချင်းကျန်းမာရေးအာမခံအစီအစဉ်ကိုသင်ရွေးချယ်နိုင်သည်။ သို့သော်၊ သင်သည်အုပ်စုလိုက်အစီအစဉ်ထက်စာလျှင်ပိုမြင့်သောလခများကိုပေးဆောင်နိုင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်စျေးနှုန်းသက်သာသည့်စောင့်ရှောက်မှုအက်ဥပဒေမှတဆင့်ပေးသောအာမခံသည်များသောအားဖြင့်ပုဂ္ဂလိကကျန်းမာရေးအာမခံများထက်ကုန်ကျစရိတ်သက်သာပြီးအလားတူခံစားခွင့်များကိုပေးသည်။ သင့်တွင်ပိုမိုမြင့်မားသောနှုတ်ယူပြီးသောအာမခံကြေးရှိပါကaကိုဖွင့်ရန်စဉ်းစားပါ ကျန်းမာရေးငွေစုအကောင့် ဆေးကုသစရိတ်အတွက်အသုံးပြုရန်အတွက်သင်အခွန်လွတ်ငွေသွင်းနိုင်သည့် (HSA) ။
သင်က ၀ န်ထမ်းအနည်းငယ်သာရှိသောကိုယ်ပိုင်အလုပ်ရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်လျှင်၊ အသင်းအဖွဲ့ကျန်းမာရေးအစီအစဉ် ။ အချို့သောအသင်းအဖွဲ့များ (ဥပမာ - စာရေးဆရာများအမေရိက၏အနောက်ဘက်အဖွဲ့နှင့်အလွတ်တန်းအသင်းများကဲ့သို့) သည်အသင်းဝင်များအတွက်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအစီအစဉ်များကိုအုပ်စုလိုက်နှုန်းထားဖြင့်ပေးသည်။ အသင်းအဖွဲ့များသည်ဤစျေးနှုန်းချိုသာသောအုပ်စုနှုန်းထားများကိုရရှိသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်၎င်းတို့သည်ကုန်သွယ်မှုနှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းများမှအခြားသူများနှင့်ကြီးမားသောအုပ်စုများဖွဲ့စည်းရန်အတွက်ဖြစ်သည်။ သို့သော်ဆိုးကျိုးများရှိသည်။ အချို့သောအသင်းအဖွဲ့များသည်သင့်အနေဖြင့်မိမိကိုယ်တိုင်အလုပ်လုပ်ကိုင်သူအဖြစ်သတ်မှတ်ထားသည့်ပမာဏကို (သူတို့ဆုံးဖြတ်သည်) ကိုသက်သေပြရန်သင့်အားအခွန်ငွေနှင့်အခြားစာရွက်စာတမ်းများပြရန်လိုအပ်သည်။ အသင်းဝင်ကြေးကိုလည်းသင်ပေးရလိမ့်မည်။ အချို့သောအသင်းအဖွဲ့ကျန်းမာရေးအစီအစဉ်များသည်အခြားအစီအစဉ်များကဲ့သို့ပြည့်စုံလုံလောက်သောလွှမ်းခြုံမှုပေးနိုင်မည်မဟုတ်ပါ၊ အချို့သောအသင်းအဖွဲ့များကျန်းမာရေးစီမံကိန်းများ၏အရည်အချင်းပြည့်ဝမှုနှင့် ပတ်သက်၍ စိုးရိမ်မှုများရှိနေပြီးသူတို့၏အဖွဲ့ဝင်များ၏တောင်းဆိုမှုများကိုမပေးနိုင်ခြင်းဖြစ်သည်။ ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင် Trump အုပ်ချုပ်မှုကလူအများအား AHP များသို့ဝင်ရောက်ခွင့်ပြုသည့်အစီအမံများ (ဥပမာ - ကိုယ်ပိုင်အလုပ်လုပ်သူများနှင့် ၀ န်ထမ်းများမရှိသူများ) ကိုစတင်မိတ်ဆက်ခဲ့သည်။ တရားရုံးထဲမှာပစ်ချ နှင့်အယူခံဝင်လျက်ရှိသည်။ အာမခံပွဲစားတစ်ယောက်နှင့်စကားပြောပါသို့မဟုတ်စစ်ဆေးပါ အလုပ်သမား ဦး စီးဌာန နောက်ဆုံးပေါ်သတင်းအချက်အလက်များအတွက်ဝက်ဘ်ဆိုက်။
ကျန်းမာရေးခွဲဝေမှုအစီအစဉ်များသည်ကျန်းမာရေးအာမခံမဟုတ်ပါ။ ယင်းအစားသူတို့သည်ကျန်းမာရေးခွဲဝေမှုအဖွဲ့ ၀ င်များအကြားကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုကုန်ကျစရိတ်များကိုမျှဝေရန်အစီအစဉ်များရှိနေသည်။ သင်ကရပ်ရွာရန်ပုံငွေသို့အပ်နှံထားသည့် (သင်ရွေးချယ်သောအစီအစဉ်အပေါ် အခြေခံ၍) အမြင့်ဆုံးပေးချေသည်။ သင်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုလိုအပ်သည့်အခါငွေတောင်းခံလွှာကိုရန်ပုံငွေမှထုတ်ပေးသည်။ သို့သော်ဤအစီအစဉ်များသည်ယုံကြည်ခြင်းကိုအခြေခံသည်။ အချို့သောဆေးဘက်ဆိုင်ရာ ၀ န်ဆောင်မှုများ (ဥပမာ - မွေးဖွားခြင်းနှင့်ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချခြင်းကဲ့သို့) ကိုဖုံးကွယ်မည်မဟုတ်ကြောင်းသတိပြုပါ။ ၄ င်းတို့သည်ကျန်းမာရေးအာမခံမဖြစ်သောကြောင့်ဤမျှဝေခြင်းအစီအစဉ်များသည် ACA နှင့်လိုက်လျောညီထွေမှုမရှိသောကြောင့်ရှိပြီးသားအခြေအနေများရှိသူများကိုလွှမ်းခြုံနိူင်မည်မဟုတ်ပါ။ အချို့ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာခွဲဝေမှုအစီအစဉ်များသည် ၄ ​​င်းတို့၏အဖွဲ့ ၀ င်များ၏တောင်းဆိုမှုများအတွက်၎င်းတို့ပေးဆပ်ရမည့်ငွေပမာဏကိုကန့်သတ်ထားသည်။ ၎င်းမှာပြင်းထန်သောဆေးဘက်ဆိုင်ရာပြproblemsနာများဖြစ်ပေါ်နေသူများအတွက်ပြaticနာဖြစ်နိုင်သည်။
တီသူသည် Omnibus ဘတ်ဂျက်ပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးအက်ဥပဒေကိုပေါင်းစုခဲ့သည် (ကိုဘရာ) သင်သည်အလုပ်မှထွက်ပြီးသည့်နောက်ယခင်အလုပ်ရှင်၏ကျန်းမာရေးအာမခံအစီအစဉ်အောက်တွင်ခေတ္တနေထိုင်ရန်အခွင့်အရေးကိုအာမခံသည်။ ဘယ်လောက်ကြာကြာနေနိုင်မှာလဲ။ ဥပမာအားဖြင့်၊ သင်သည်လက်မခံနိုင်သောအပြုအမူမဟုတ်သည့်အကြောင်းပြချက်များကြောင့်သင့်အလုပ်မှရပ်စဲလျှင် ၁၈ လအထိသင်ဆက်လက်နေထိုင်နိုင်သည်။ အခြားအရည်အချင်းပြည့်မီသောဖြစ်ရပ်များအတွက်သင် ၃၆ လအထိဆက်နေနိုင်သည်။ ယူအက်စ်အလုပ်သမားရေးရာဌာန၏အဆိုအရအခြားအရည်အချင်းပြည့်မီမှုဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်များရှိသည်။ အဘယ်အရာကိုပိုင်, အလွှမ်းခြုံအတူတူပင်ဖြစ်သော်လည်း, သင်သည်သင်၏အလုပ်ရှင်မရှိတော့ပါကမဆိုထောက်ပံ့သောကြောင့်, သင်ပိုမိုအာမခံ၏ Out-of- အိတ်ကပ်ပေးဆောင်ရပါလိမ့်မယ်။
ရေတိုကျန်းမာရေးအစီအစဉ်များသည်ယာယီ၊ တစ်နှစ်တာ၊ နိမ့်ကျသော၊ မြင့်မားသောနှုတ် ယူ၍ ရသောကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအစီအစဉ်များဖြစ်ပြီး၊ အာမခံ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြင့်၊ ၃ နှစ်အထိသက်တမ်းတိုးနိုင်သည်။ သို့သော်၎င်းတို့သည်ဒေသများစွာတွင်မပြည့်စုံပါ။ လူအပေါင်းတို့၏ပထမ ဦး စွာသူတို့က Pre- ရှိပြီးသားအခြေအနေများဖုံးလွှမ်းကြပါဘူး။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေး၊ ဆေးညွှန်းနှင့်ဆေးဝါးများမပါ ၀ င်ပါ။ ထိုသူတို့ထဲကအတော်များများသည်သင် Out-of- အိတ်ကပ်ကုန်ကျစရိတ်အတွက်ပေးဆောင်စေခြင်းငှါ, အဘယျသို့အကန့်အသတ်မပေးပါဘူး။
ကိုယ်တိုင်အလုပ်လုပ်နိုင်သောကျန်းမာရေးအာမခံကိုရွေးချယ်ရာတွင်စဉ်းစားရမည့်အချက် ၅ ချက်
ကျန်းမာရေးအာမခံအစီအစဉ်များတွင်အလွှာပေါင်းများစွာရှိသည်။ ဥပမာအားဖြင့်ပလက်တီနမ်၊ ငွေ၊ ကြေးတို့ဖြစ်နိုင်သည်။ ၎င်းတို့အားလုံးသည်ကွဲပြားခြားနားသောကုန်ကျစရိတ်များဖြင့်လွှမ်းခြုံမှုပေးသည်။ ပွဲစားတစ် ဦး သို့မဟုတ်အေးဂျင့်သည်သင့်အားရွေးချယ်စရာများနှင့်ဗန်းစကားအားလုံးကို ဖြတ်၍ သင်နှင့်သင့်တော်မည့်အစီအစဉ်ကိုရှာဖွေရန်ကူညီနိုင်သည်။
ပြည်နယ်အားလုံး၌သင်၏ပြည်နယ်လိုအပ်ချက်နှင့်ကိုက်ညီသောစီမံကိန်းကိုဘက်လိုက်မှုမရှိသောအကူအညီများပေးနိုင်သည့်ပြည်နယ်ကျန်းမာရေးအာမခံအကူအညီအစီအစဉ် (SHIP) ရှိသည်။ Marketplace helpline သို့မဟုတ် 1-800-Medicare (အကယ်၍ သင် Medicare အရည်အချင်းပြည့်မီလျှင်) အားဖြင့်အစီအစဉ်ကိုရှာဖွေရာတွင်ဘက်လိုက်မှုမရှိသောအကူအညီများကိုသင်ရနိုင်သည်။
သင်၏ဝင်ငွေပမာဏအပေါ် မူတည်၍ သင်ကျန်းမာရေးအာမခံကိုကုန်ကျစရိတ်သက်သာပြီးလုံးဝမပေးနိုင်ပါ။ (Medicaid) ။ သင့်အတွက်အကောင်းဆုံးအစီအစဉ်ကိုရှာဖွေစဉ်မည်သည့်ထောက်ပံ့ကြေးကိုသင်ရထိုက်သည်ကိုသိရန်အသုံးဝင်သည်။
သင်သည်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုစျေးကွက်မှအာမခံကို ၀ ယ်သောအခါသင်၏ပရီမီယံများသည်ယခုနှစ်အတွက် ၀ င်ငွေအပေါ်အခြေခံသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ၊ အလွတ်တစ်ခုအနေဖြင့်သင်ယခုနှစ်လေးပုံသုံးပုံအတွက်သင်မည်မျှငွေရှာမည်ကိုကြိုတင်တွက်ဆရန်လိုသည်။ ၎င်းသည်လှည့်စားနိုင်သည်၊ ထို့ကြောင့်အတိတ်ကာလကသင်လုပ်ဆောင်ခဲ့ပုံကိုစဉ်းစားရန်၊ သင်၏ခန့်မှန်းချက်သည်လက်တွေ့ကျပါကသင့်ကိုယ်သင်မေးရန်နှင့်သင်၏ဝင်ငွေကိုအကျိုးသက်ရောက်နိုင်သည့်သင်၏လုပ်ငန်းနယ်ပယ်တွင်ဘာတွေဖြစ်နေလဲစဉ်းစားရန်အချိန်ယူပါ။ သင်ထင်သည်ထက်ပိုငွေရှာလျှင်၊ အခွန်ခရက်ဒစ်မှတစ်ဆင့်ရရှိသောငွေကိုသင်ပြန်ပေးရပေမည်။ အကယ်၍ သင်သည်ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်နည်းလွန်းလျှင်ငွေစုကိုသင်လွတ်သွားနိုင်သည်။
ကျန်းမာရေးအာမခံအစီအစဉ်ကိုကိုယ်ပိုင်အလုပ်လုပ်သူအဖြစ်သတ်မှတ်ခြင်းသည်ဘဏ်ကိုချိုးဖောက်ခြင်းသည်အကောင်းဆုံးမဟုတ်ပါ။ ဒါပေမယ့်သင်ကဈေးအသက်သာဆုံးနည်းလမ်းကိုတောင်ဖြေရှင်းချင်မှာမဟုတ်ဘူး။ မိမိကိုယ်ကိုအလုပ်လုပ်ကိုင်ခြင်းနှင့်သင်၏ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းကိုလုပ်ကိုင်ခြင်းသည်စိတ်ဖိစီးမှုများစေသည်။ သင်နှင့်သင့်မိသားစုဝင်များသည်ကျန်းမာရေးအကျပ်အတည်းနှင့်အတူပေါ်ပေါက်လာသည့်ဆေးဝါးကုသမှုဆိုင်ရာဥပဒေကြမ်းများပေါ်ပေါက်လာပါကသင်သို့မဟုတ်သင့်မိသားစုဝင်များမည်သို့ဖြစ်သွားမည်ကို ထပ်၍ စိုးရိမ်စရာမလိုပါ။
ကောင်းမွန်သောစည်းကမ်းချက်တစ်ခုသည်အစီအစဉ်တစ်ခုမှနှုတ်ယူခြင်းနိမ့်လေလေပရီမီယံသည်လစဉ်ဖြစ်လိမ့်မည်ကိုသိရန်ဖြစ်သည်။ နိမ့် / မြင့်မားသောကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအစီအစဉ် (သို့မဟုတ်အပြန်အလှန်) သည်သင့်အတွက်သင့်မသင့်ကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရန်သင်၏အသက်၊ အလုံးစုံကျန်းမာရေး၊ ဆရာဝန်များကိုသင်အကြိမ်မည်မျှလာရောက်လည်ပတ်သည်နှင့်သင်၌ကျန်းမာရေးအခြေအနေရှိမရှိစဉ်းစားပါ။
တစ် ဦး တစ်ယောက်ထက်မကပါဝင်သည့်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအစီအစဉ်များအတွက်အာမခံသူများကများသောအားဖြင့်ပိုပေးကြသည်။ သင်၌အလုပ်လုပ်ကိုင်သောအိမ်ထောင်ဖက်သို့မဟုတ်အိမ်ဖော်တစ် ဦး ရှိပါက၎င်းအစီအစဉ်သစ်ကိုလက်မှတ်မထိုးမီသူတို့၏အစီအစဉ်ကိုရယူခြင်း၏ကုန်ကျစရိတ်ကိုရှာဖွေခြင်းသည်အကျိုးရှိသည်။
အကယ်၍ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုကိုသင်တတ်နိုင်သော်လည်းဝယ်ယူရန်မရွေးချယ်ပါကဖယ်ဒရယ်အစိုးရအနေဖြင့်ပြစ်ဒဏ်မပေးတော့သော်လည်းသင်၏ပြည်နယ်သည်သင့်အားအခက်အခဲကင်းလွတ်ခွင့်ပေးလိမ့်မည်ဟုမဆိုလိုပါ။ ယခုအချိန်အထိမက်ဆာချူးဆက်၊ နယူးဂျာစီနှင့်ဗားမောင့်တို့သည်ကျန်းမာရေးအာမခံကိုငြင်းပယ်သောဒေသခံများအားပြစ်ဒဏ်ပေးပြီး၊
IRS ကသင့်ကိုတစ်စုံတစ်ရာယူခွင့်ပြုသည် Self- အလုပ်ကျန်းမာရေးအာမခံနှုတ်ယူခြင်း သငျသညျထိုနှစ်တွင်အမြတ်အစွန်းကိုဖန်ဆင်းလျှင်။ ၎င်းသည်သင်ကိုယ်တိုင်၊ သင်၏အိမ်ထောင်ဖက်နှင့်သင်၏မှီခိုသူများအတွက်ကျန်းမာရေးအာမခံနှင့်ရေရှည်စောင့်ရှောက်မှုအာမခံအတွက်သင်ကျန်းမာရေးအာမခံအတွက်သင်ပေးဆောင်သောပရီမီယံများအတွက် ၀ င်ငွေ (သတ်မှတ်ထားသောအခွန်လျှော့ချခြင်းမဟုတ်) အတွက်ညှိနှိုင်းမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒါ့အပြင်သင်သည်သင်၏စုစုပေါင်း ၀ င်ငွေ၏ ၇.၅% ထက်ကျော်လွန်သောသင်၏ဆရာဝန်ကုန်ကျစရိတ် (ဆရာ ၀ န်များလာရောက်လည်ပတ်ခြင်း၊ ဆေးရုံကြေးနှင့်ဆေးညွှန်းမျက်မှန်များကဲ့သို့) အတွက်သင်၏ကုန်ကျစရိတ်ကိုနုတ်နိုင်သည်။
အာမခံထားသူများသည်များသောအားဖြင့်သူတို့အိတ်ကပ်ထဲမှပေးဆပ်မည့်ငွေပမာဏကိုအကန့်အသတ်ဖြင့်သာထားလေ့ရှိသည်။ အာမခံမရှိသူများတွင်ထိုကဲ့သို့သောကန့်သတ်ချက်မရှိပါ။ အကယ်၍ နှလုံးရောဂါသို့မဟုတ်အသက်အန္တရာယ်ဖြစ်စေသောမတော်တဆမှုကဲ့သို့သောအရာတစ်ခုခုခံစားနေရပါကအာမခံမရှိသောလူများသည်ဒေါ်လာထောင်နှင့်ချီ။ ဒေါ်လာထောင်နှင့်ချီ။ ရနိုင်သည်။ အာမခံမရှိခြင်းသည်စျေးကြီး။ မြန်ဆန်နိုင်သည်။
သင်၏အသက်အရွယ်၊ သင်နေထိုင်သည့်နေရာ၊ အာမခံရရှိသောနေရာနှင့်သင်ရွေးချယ်သောအစီအစဉ်များကဲ့သို့သောပြောင်းလဲမှုများစွာနှင့်အတူ၎င်းသည်ဖြေဆိုရန်မဖြစ်နိုင်လောက်သောမေးခွန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၂၀၁၁ ခုနှစ်တွင်ပြုလုပ်သောအလုပ်ရှင်၏ကျန်းမာရေးအကျိုးခံစားခွင့်နှင့် ပတ်သက်၍ စစ်တမ်းအရ ခိုင်ဆာဖောင်ဒေးရှင်း , သူတို့ရဲ့ကုမ္ပဏီ၏ကျန်းမာရေးအာမခံစာရင်းသွင်းတစ်ခုတည်းသောလူများအတွက်ပရီမီယံတစ်နှစ်လျှင် $ 7,188, အလုပျသမားကြောင်း - သို့မဟုတ်အကြောင်းကို $ 400 တစ်လပေးဆောင်နှင့်အတူတစ်နှစ်လျှင် $ 7.118 သို့ပွေးလေ၏။ ထိုတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းထောက်ပံ့မယ့်ကုမ္ပဏီ - ကမကထအစီအစဉ်ကို။ လွတ်လပ်သောကန်ထရိုက်တာတစ်ယောက်အနေဖြင့် (သင်အစိုးရထောက်ပံ့ကြေးသို့မဟုတ် Medicare အတွက်အရည်အချင်းပြည့်မှီမှမဟုတ်လျှင်) သင်အနည်းဆုံးပေးရလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်နိုင်သည်။ အထက်ဖော်ပြပါအခွန်သက်သာခွင့်များသည်ကုန်ကျစရိတ်ကိုသက်သာစေသည်။ ဒီတော့ SingleCare နိုင်ပါတယ်။
The SingleCare အခမဲ့သုံးစွဲနိုင်သောဆေးညွှန်းငွေစုကဒ် CVS၊ Target, Walmart စသည်ဖြင့်တစ်နိုင်ငံလုံးရှိဆေးဆိုင် ၃၅၀၀၀ ကျော်တွင်ဆေးညွှန်းအပေါ် ၈၀% အထိသက်သာစေနိုင်သည်။ ပျမ်းမျှအားဖြင့် SingleCare သုံးစွဲသူများသည်သူတို့ဆေးညွှန်းတွင်တစ်နှစ်လျှင်ပျမ်းမျှဒေါ်လာ ၁၅၀ ချွေတာသည်။ SingleCare တွင်အခကြေးငွေနှင့်ကြေးပေးသွင်းမှုများမရှိပါ။ အာမခံဆေးညွှန်းအစီအစဉ်ပါသူများပင်၎င်းကို သုံး၍ သိမ်းဆည်းနိုင်သည်။ တစ်ခါတစ်ရံကျွန်ုပ်တို့၏စျေးနှုန်းသည်သင်၏အာမခံပူးတွဲပေးချေမှုထက်သင့်ကိုပိုမိုနိမ့်သောစျေးနှုန်းများပေးလိမ့်မည်။ အသုံးပြုပါ ချစ်သူ သင်၏ဆေးညွှန်းကိုရှာဖွေရန်နှင့်သင့်ဆေးဝါးများကိုအနိမ့်ဆုံးဈေးနှုန်းဖြင့်သင်အနီးဆုံးဆေးဆိုင်ကိုရှာဖွေရန်။
အဓိကအချက် - ကျန်းမာရေးအာမခံမရှိခြင်းကိုမစွန့်စားပါနှင့် - သင်အာမခံထားမှုမရှိပါကသင်ပိုမိုကုန်ဆုံးသွားနိုင်သည်။ အလုပ်လုပ်ကိုင်သူများအတွက်ကျန်းမာရေးအာမခံအစီအစဉ်များသည်သင်နေထိုင်ရာနှင့်သင်၏ဝင်ငွေပေါ် မူတည်၍ ကွဲပြားနိုင်သည်။ သင်၏အိမ်စာလုပ်ရန်အချိန်ယူပါ၊ လွှမ်းခြုံမှုတွင်သင်ချွေတာနိုင်သည့်နည်းလမ်းများစွာကိုစဉ်းစားပါ။
apple cider vinegar ကဘာလုပ်သလဲ